Ụbọchị ọmụmụ m! | Martech Zone
Ụbọchị ọmụmụ m!
ExactTarget bụ nnukwu ebe ịrụ ọrụ!
N'ụtụtụ a, ndị mụ na ha na-arụkọ nri / ndị mụ na ha na-arụkọ ọrụ / ndị mụ na ha na-emekọ nri tụrụ m n'anya nke ọma. Mezue na ụbọchị ọmụmụ confetti (kpachara anya ka ị ghara inweta ihe ọ bụla na keyboard m), Obi ụtọ ụbọchị ọmụmụ ụbọchị ọmụmụ, igwe Expresso (!!!), Dr. a "Tide To Go" Stain Remover (ebe ọ bụ na m na-alọghachi mgbe nri ehihie na otu dobe ihe na uwe m).
Gaghị enwe ezigbo ụbọchị ọmụmụ karịa nke a! (Ruo mgbe m rutere n'ụlọ, ụmụ m na-eri nri m na kandụl m 'N'ime ugwu'!). Geez, abughi m 40 ma!
Tags: Ụbọchị ọmụmụdouglas karrkpachaara anyaụlọ ọrụ